Iingcebiso eziphambili ze-Twitter ezivela kwiNkonzo zeDemal Digital
I-Twitter yenye yezona ndawo zihamba phambili kwaye ziyaziwa kakhulu. Yindlela elula yokufumana abalandeli abaninzi, ukuchofoza ngaphezulu kunye nokwabelana nge-intanethi. Ngokubelana nomxholo wakho kwi-Twitter, unokuqiniseka ngokufumana ukubonakala okukhulu, ngokusekelwe kwinani labalandeli bakho. I-Twitter ibonisa amathuba amaninzi okuthengisa kwaye inikeza amathuba amaninzi okusasaza umxholo, ukubandakanya abantu kwi-inthanethi, nokukhuthaza uphawu lwakho. Apha, u-Artem Abgarian, Semalt uMphathi oyiNtloko yeMpumelelo yoMthengi, uxubushe ngeendlela ezilungileyo zokufumana ixabiso lee-tweets zakho kunye nee-media media .
Cwangcisa iifayile zakho rhoqo
Kumele uqaphele ukuhlela zakho izithuba kunye neetweets ezinxulumene nomfanekiso ngexesha elifanelekileyo. Enye yezona mpazamo eziphambili esenzayo kukuba asinabelana ngezithuba kwaye asiyi kugcina i-akhawunti yethu ye-Twitter ihlaziywe. Kubalulekile ukwabelana ngezinto kunye nokuzibandakanya izinto ezintathu ukuya kwezine ngosuku ukwenzela ukuba abantu abaninzi baninzi bakhangwe kwii-tweets zakho. Ukwenza njalo kuya kuqinisekisa ukuba ukwandisa inani labalandeli bakho be-Twitter kwaye unako ukusasaza igama lakho ngendlela engcono. Kunconywa kakhulu ukuba wenze ulungiso nganye kwiyure ukwenzela ukuba abalandeli bakho bahlale bexanduva.
Yenza iphepha elisekhaya elitsha kunye neenlist ezintsha
Enye into ongayenzayo yakha enye okanye ezimbini zeeplanga ngeelwimi ezintsha kunye nokubandakanya umxholo. Ekugqibeleni izokufumana abalandeli abaninzi be-Twitter, okwandisa ukubonakala kwewebhusayithi kunye nokwethembeka kwi-intanethi. Ikhasi lakho lasekhaya le-Twitter linakho niche okanye isihloko, esekelwe kwimdla kunye neemfuno zabaphulaphuli bakho.
Yenza kwakhona umxholo kwi-Twitter
Ukuba ukholelwa ukuba ukwabelana ngomxholo kanye ngexesha elithile kwi-Twitter kwanele, makhe ndikuxelele ukuba wenze iphutha elibi. Iingcali ezahlukeneyo ze-tech kunye nabathengisi be-digital bathi ukuhlaziya umxholo kwi-Twitter kunye ne-Facebook kubalulekile ekusindeni kwebhendi kwi-intanethi. Ngaloo ndlela, akufanele uyeke ukwabelana nomxholo xa kwabelwana ngawo. Kunoko, kufuneka uhlanganyele izinto ezimnandi ngoku kunye nokuqinisekisa ukuba izinga lokubandakanyeka labasebenzisi ligcinwa kulo lonke.
Qaphela umlinganiselo-olandela umlandeli
Asikho isidingo sokukhathazeka malunga nomlinganiselo olandelayo-umlandeli. Kunoko, ufanele uqhubeke usebenza kanzima kwaye uqhubeke uxelela izinto ezintsha kwi-Twitter, kungakhathaliseki ukuba unabalandeli abangaphila kwi-intanethi. Nika ingqwalasela ngakumbi kubandakanyeki bakho kubasebenzisi kunokuba ukhangele umlinganiselo walandeli abalandelayo kanye okanye kabini ngosuku. Makheke apha ndikuxelele ukuba ngokuqinisekileyo kuya kwandisa ubume bakho boonondaba boluntu kwaye ugcine uphawu lwakho luhlala emehlweni kubalandeli bakho be-Twitter ubomi.
Ekugqibeleni, singathanda ukuthetha ukuba kukho iiprogram ze-Twitter kunye nezixhobo ezikwazi ukulawula umgangatho wabalandeli bakho. Ungasebenzisa ezi zixhobo ukuyeka ukulandela nokuvimba ii-akhawunti ezikhohlisayo. Qinisekisa ukuba abalandeli abayifumanayo yonke into iyinyani kwaye ivumelekile ukwenzela ukuba iimpawu zewebhusayithi yakho kunye nokugcinwa kwe-media yakho kulondolozwe kude kube sekupheleni.